U dayactir Your iPhone Dhawaansho sensor Naftaada .
Waa maxay iPhone shidma u dhow?
IPhone waa mid ka mid ah telefoonada gacanta ugu caansan oo adag oo ku saabsan suuqa maanta. Cadibo iPhone loo yaqaan Apple, ay qaataan waqti si ay u sameeyaan, qalabka waara xoog. Si kastaba ha ahaatee iyadoo wax qalab laga heli karaa maanta farsamada waxaa jira dhibaatooyin ay suuragal tahay in ay muujiso doonaa wakhti waqti. In this article waxaan eegi doonaa dhawaanshaha shidma iPhone. Ugu horeyn ah dhawaanshaha shidma iPhone waa nooc ka mid ah shidma in asal ahaan lagu ogaadaa marka user uu leeyahay qalab ku dhow in ay wajiga, inta lagu guda jiro call a tusaale ahaan. Waa maxay shidma dhawaanshaha falaa waa inuu u sheego iPhone in ku dhow yahay inuu wejigaaga si ay tahay in gab taabtona waa in ay ka fogaadaan gashiga iyo nalalka la rabin shaashadda, si loo badbaadiyo batteriga. Shidma dhawaanshaha waa nooc aad u sahlan ee feature oo la dhisay iPhone kasta.
Waa maxay dhibaatooyinka ka dhigi doonaa ah dhawaanshaha shidma iPhone ee waa jabtay?
Aaladaha Apple waa mid aad u xoog badan, oo waxay qaadan kartaa wax weyn oo rogrogmadaa laakiin markii qeybo ka mid ah iPhone bilaabo inuu cillad sida shidma dhawaanshaha, waxay noqon kartaa xunuun ah. Marka iPhone ah "shidma dhawaanshaha waa la dumiyey, waxaa jira arrimo badan oo isdhaaf ah in ay dhici doonto iyadoo ay sabab u this.
Beddelidda shaashadda aad iPhone - Tani waa arrin aad caadi u leh dadka isticmaala iPhone. Marka screen qalab la bedelo, waxa ay ku socotaa in khatar dhibaato qaar ka mid ah shidma dhawaanshaha, sida aysan u shaqeeyaan fiican u socdaan. Marka ay tani dhacdo, waa in aad u qabtaan falalka sida iska shaashadda mar kale iyo in la hubiyo in si sax ah iyo kaalinta shidma ee aan la daboolay. Waxaad u baahan tahay in ay sidoo kale reposition camera iyo isku dhawaanshaha shidma hore si uu u helo fursad weyn oo laga yaabo in ay mar kale shaqeeyaan.
Hit A weyn dushiisa adag - sifo ah ugu telefoonada gacanta waa in ay adag oo ku filan in ay ka gudbaan dhibcood, qofkaasina iyo xagashada, laakiin inkastoo nooca fikrad galaas bakhtiyo iyo iska caabin biyaha tiknolojiyada hirgeliyey qalabka iPhone, waxaa jiri kara waxyeelo kale oo lama huraan ah sida sida dhibic adag uu saaran yahay meel adag. Marka aad iPhone dhaco aad u adag, waxay si joogto ah burburin karo shidma dhawaanshaha ee iPhone-ka ah oo uu dhigi doono in aan la shaqeeyo.
Dhibaatada saaraha - Apple waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee warshadaha ee mobile laakiin in macnaheedu aanu ahayn, in aanay noqon kartaa qaladka mar uun. Technology waxay doonaan in ay mararka qaarkood u fashilmaan iyo marka aad iibsato iPhone inaad ku gaadhaan danihiina laga yaabaa in shidma dhawaanshaha ma shaqayn haba yaraatee wax. Quraankani ma aha dhibaatada soo saaraha ah, maxaa yeelay, aad laga yaabo in ay kaliya iibsaday telefoonka dhawr maalmood ka hor dhibaatadu dhacday.
Waxa la sameeyo haddii aad rabto si uu u xaliyo aad iPhone keligaa, qor tallaabooyinka la sawir ama video
Jebiyey iPhone ah? Ma doonaysaa in ay u go'an si aad dib ugu noqon karaan in maalmaha wanaagsan marka aad telefoon la shaqeeyo? Waa hagaag waxaa jira siyaabo iyo tallaabooyinka aad qaadi karto inuu ka soo kabsado aad rayn iPhone dib ugu gobolka ka shaqeeya fara badan. Tallaabooyinka hoos ku qoran yihiin si ay kuu caawiyaan, haddii aad rabto in aad si uu u xaliyo aad iPhone naftaada halkii ay qaadato si farsamo ah ama ganacsade shahaado. Dhammaan xeeladaha loo isticmaalo waa in si taxadar leh ay sameeyeen.
Talaabada 1: reboot telefoonka - Mararka qaarkood, kuwaas oo arrimo weyn kaliya waxay u baahan yihiin arin fudud marka aan u malaynayso runtii waa 'gantaal sayniska'. Haddii aad ku gaadhi lahayd shidma dhawaanshaha aan shaqayn haba yaraatee, waxaad u baahan tahay si ay u qabtaan reboot hal mar ama laba jeer. Tani waa in la sameeyaa gaar ahaan xaaladaha meesha shidma dhawaanshaha la shaqeeyo oo aad u ma soo daadiyaa ama loo soo dajiyo kasta oo software leheyn ee aad iPhone. Haddii ay taasi uma shaqeeyo ka dib baad u samaysay oo ku saabsan laba jeer, ka dibna aad sii wadi karo in aan xoojinno laba.
Talaabada 2: Ku teedo ama la bedelo qabsaday dhawaanshaha - shidma ayaa dhawaanshaha on iPhone uu leeyahay qaybo kala duwan sida dhawaanshaha qaban tusaale ahaan. Hold u dhow waa in la si fiican u safan meel sax ah u shidma inay ka shaqeeyaan. Hold ayaa sidoo kale waa in isbedel haddii dhibaato soo gaadho ama la beddelo haddii maqan, sababtoo ah mararka qaar waxaan dissemble iPhone oo qabsaday dhawaanshaha uu hoos u dhaco oo aan na isagoo garanaya. Marka dhawaanshaha qabsaday iPhone waxaa bedelay ama la safan si sax ah waa in ay u hagaajin arrinta. Waxa kale oo aad ku dari kartaa aaladda wax yar oo cajalad si shidma si loo hubiyo in uu yahay ma dhici aan ka bixin. Talaabadani waxay u baahan tahay qaar ka mid ah ka-fiirsashada iyo aqoon ku saabsan qaybaha kala duwan ee iPhone-ka si aad u samayn lahayn wax waxyeello ah ama aan u qalmin fiilooyin iwm
Talaabada 3: Isticmaal sharooto korontada u screens aftermarket - Haddii aad dhawaan bedesho screen iPhone inaad ku gaadhaan danihiina laga yaabaa in tani ay tahay waxa keenaya shidma ma jiido shaqada. Waxa aad hadda in kastoo samayn karin waa in uu helo sharootada korontada qaar ka mid ah iyo dissemble taleefanka si aad u gelin karaa si taxadar leh ay ula wareegaan screen iyo galaas shidma. Kaddibna waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho mindi ama wax wax kale fiiqan si feeraan laba dalool yar galay cajalad si dareemayaal ku garan karaan iftiiminta oo u saamixi doontaa in ay ka shaqeeyaan. Screens aftermarket waxaa jidaynayey iftiin aad u badan si ay u galaan shidma dhawaanshaha iyo tani waa sababta aad u ogaato in aad dareemayaal ma si sax ah u shaqeeyaan. Dhalato this Marka aad codsato awoodo si aad u hesho waxa aad naftaada ka shaqeeya waa in aad noqon.
Waxaa ka mid ah dhammaan dhibaatooyinka iPhone arrimaha la shidma dhawaanshaha, qaar ka mid ah kuwa ugu naxo. Waxay noqon kartaa mid aad looga xumaado marka aad iPhone ayna shidma dhawaanshaha.
> Resource > iPhone > dayactir Your iPhone Dhawaansho sensor Naftaada